Maxay Ka Wada Hadleen Museveni Iyo Farmaajo? – Kala Soco Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Maxay Ka Wada Hadleen Museveni Iyo Farmaajo?
Muqdisho-FMN-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo safar shaqo ku jooga dalka Uganda, ayaa la kulmay dhiggiisa dalkaas Mudane Yoweri Museveni.Labada Madaxweyne waxa ay ka wadahadleen xoojinta xiriirka iskaashi ee labada dal, amniga gobolka iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyay dowladda Uganda kaalinta muhiimka ah ee ay ka qaadatay nabad ilaalinta Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Alshabaab.Madaxweynaha Uganda Mudane Yoweri Museveni ayaa dhankiisa tilmaamay sida ay uga go’an tahay in ay garab istaagaan Soomaaliya.Madaxweyneyaasha labada dal, wax ay isla qaateen muhiimadda ay leedahay in la dardar geliyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Alshabaab, si meesha looga saaro khatarta ay ku hayaan deganaanshaha gobolka.
Previous Previous post: Waa Sidee Xaaladda Caafimaad ee Dhaawacyadii Turkiga La geeyay.Q-2aad.
Next Next post: Madaxweynayaasha Maamul-goboleedyada Oo Jowhar Soo Gaaray.